Ntinye na nhazi nke Gnome-Shell na Ubuntu | Site na Linux
Ntinye na nhazi nke Gnome-Shell na Ubuntu
Na nso nso Agwara m ha okwu onye nyeere ohere Gnome-Shell site Ubuntu 11.04 ma ekwe m gị nkwa ụdị nkuzi banyere otu esi etinye ya ma hazie ya ntakịrị. N’ezie, m wetaara gị ihe m kwere nkwa.
(I meela nke ukwuu na ndị ọrụ niile meziri ụfọdụ njehie mgbe ị na-ede aha nchịkọta)
2 Nhazi obere.
3 Iji Mgbatị.
4 Na-agbanwe bọtịnụ windo.
Ihe mbụ ị ga-eme ka o doo anya bụ na ozugbo anyị mere nke a, opekata mpe na Nattykelee ọma Ịdị n'Otu na ọ ga-ekwe omume na na Gnome 2 nwee nsogbu. Ọ bụrụ na ha na-eji Ubuntu Natty u N'elu ugwu nwere ike ime ka a PPA raara nye Gnome 3. Maka nke a, anyị tinye usoro ndị a na faịlụ /etc/apt/sources.list anyị:
deb http://ppa.launchpad.net/gnome3-team/gnome3/ubuntu natty isi deb-src http://ppa.launchpad.net/gnome3-team/gnome3/ubuntu natty isi
Mgbe e mesịrị, anyị na-emelite site na imeghe ọnụ na-etinye:
$ sudo apt-nweta mmelite
na mgbe ahụ
Ozugbo usoro a gwụchara, a:
$ sudo apt-nweta nweta nkwalite && sudo apt-nweta wụnye gnome-shell dconf-ngwaọrụ gnome-themes-standard gnome-session-fallback gnome-tweak-tool
Ọ bụrụ na ha achọpụta mgbe emelitechara nchịkọta niile, m na-etinye dconf-ngwaọrụ y gnome-gburugburu-standart. Nke a dị mkpa maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke Gnome-Shell na iji gosipụta isiokwu ahụ n'ụzọ ziri ezi Gtk ndabara.
Nke a ga-ezu, anyị malitegharia ma ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma (nke kwesịrị ịga nke ọma), anyị ga-enwe ike ịnweta desktọọpụ anyị.
Ndi an-kpọ Gnome-Shell o kwesiri ile anya dika ihe a:
Mana echiche bụ ịhapụ ya otu a:
ma ọ bụ ụzọ a:
Nke mbu, aghaghi m ịgwa gi na otu ihe bu isiokwu Shell na isiokwu dị ezigbo iche Gtk nke ngwa. Ha bụ ihe ndị ahaziri iche iche. Ọ dabara nke ọma, e nweela ọtụtụ isiokwu Gnome-Shell nke gunyere otu udiri aha ahu Gtk. Anyị nwere ike ịchọta ha n'ime ArtsDesktop ma ọ bụ zụọ anyị onwe anyị na a mbara gallery na Deviantart.
Ugbu a olee otu anyị ga-esi gbanwee ọdịdị nke Gnome-Shell? Ka anyi nwalee isiokwu a Zukitwo, dịka ọmụmaatụ.
1- Anyị na-agbada faịlụ a anyị wepu ya.
2- Anyị na-e copyomi nchekwa Zukitwo, Zukitwo-Ọchịchịrị y Zukitwo-Ntughari a / usr / share / gburugburu.
$ sudo cp -R / ụzọ / Zukitwo * / usr / share / themes /
3- N’ime folda ahụ Zukitwo Enwere oku gnome-shei nke anyị ga-edegharị aha na ya isiokwu ma detuo ya n'ime / usr / share / gnome-shei mana nke mbu, anyi aghaghi ime nkwado ndabere nke ederede ndabara.
$ sudo mv / usr / share / gnome-shell / isiokwu / usr / share / gnome-shell / theme_default $ sudo cp / ụzọ / Zukitwo / gnome-shell / usr / share / gnome-shell / isiokwu
Iji hụ mgbanwe anyị na-eme F2 dị elu anyị na-ede «R» -enweghị ruturu na pịa Tinye.
Mgbe obula anyi choro igbanwe isi okwu site na Shell anyị ga-emeghachi usoro a.
Na nke a anyị na-agbanwe isiokwu nke Shell ma ọ bụghị ọdịdị nke ngwa ahụ. Maka nke ahụ, anyị ga-eji gnome-tweak-ngwa ọrụ nke anyị nwere ike ime site na ịde otu aha ahụ mgbe anyị pịa F2 dị elu. Ozugbo imeghe anyị na-aga ngalaba interface na ebe anyị nwere ike ịhọrọ isiokwu Gtk na anyị chọrọ, isiokwu na akara ngosi na isiokwu cursor.
Anyị nwekwara ike iji ndokwa en Gnome-Shell y Andrew enyi anyi si WebUpd8 nos hapụrụ ụfọdụ na-akpali nnọọ mmasị na otu esi etinye ha.
Otu n'ime ndọtị nke m na-eji dịka ọmụmaatụ, bụ igosipụta ndepụta nke windo mepere emepe na panel.
Ka wụnye a dị ka ihe atụ. Maka nke a anyị ga-eji git. Ọ bụrụ na anyị enweghị nchịkọta ndị dị mkpa, anyị na-emeghe ọnụ ma tinye:
$ sudo apt-nweta wit-isi
$ cd $ git clone https://github.com/ahdiaz/gnome-shell-windowslist.git $ cp -r gnome-shell-windowslist/gnome-shell-windowslist@emergya.com ~ / .local / share / gnome- shell / ndọtị / $ rm -rf gnome-shell-windowslist
Anyị Malitegharịa ekwentị Shell
Na-agbanwe bọtịnụ windo.
Ebe m na-eji bọtịnụ Mechie, belata ma bulie ike windo n’aka ekpe, ọ dịghị onye pụrụ ime ka m tinye ha n’aka nri. Site na ndabara na Gnome-Shell ha na-abịa n'ụzọ ochie, mana anyị nwere ike ịgbanwe ya n'ụzọ dị mfe site na iji ya Gconf-Onye nchịkọta akụkọ na edezi oke na: desktọọpụ »gnome» shei »windo» button_layout na-ahapụ ya dị ka oyiyi dị n'okpuru.
Ọzọkwa, na ngalaba Windows nke gnome-tweak-ngwa ọrụ anyị nwere ike ịhọrọ isiokwu anyị chọrọ maka bọtịnụ ahụ. Luckily, ngwá ọrụ a na-enye ohere ka anyị jiri ntamu o Mgbachi.
Gnome-Shell ọ na-enwe ọganihu na mmelite ọhụụ kwa ụbọchị. N’agbanyeghi na odi ihe ndi ozo aghaghi ime "n'aka" ọ bụ eziokwu na ọ bụkwaghị ụdị nke mbụ ahụ nke ekweghị ka ịme ihe ọ bụla. Ojiji nke Ndokwa ga ẹkedori a na desktọọpụ ke style dị ka mere na FirefoxỌbụna n'oge na-adịghị anya anyị ga-enwe ike ịwụnye ha naanị site na ịnweta gbasara.gnome.org ma pịa na bọtịnụ.
Ọ bụ ihe nwute na ngwugwu abanyebeghị Nyocha Debian 🙁
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Ntinye na nhazi nke Gnome-Shell na Ubuntu
Enwere m olileanya na n'oge na-adịghị anya "Gnome-shell" na "Unitydị n'otu" ga-abụ nhọrọ iji họrọ n'ụzọ dị mfe na nkesa ọ bụla na-eji Gnome. Onweghi ihe kwesiri ịbụ sọọsọ, maọbụ ewepu ya (belụsọ ma ọ bụ maka ebumnuche dị mkpa), na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ.
Ka ọ dị ugbu a, ezigbo ahụmịhe Gnome-shekwe ga-ekwe omume na Fedora 15 (na Debian, Ubuntu na ndị ọzọ agaghị m akwado ya); na ịdị n'otu ka enweghị ebe (na nsonaazụ ọma) na mpụga Ubuntu.
Peoplefọdụ ndị na-eche na asọmpi na-adị mma mgbe niile, mana ọ nwere ike ọ gaghị adị, ma ọ dịghị ihe ọzọ n'onwe ya ma ọ dịghị ihe ọzọ maka mmadụ niile. Ọ ga-aba uru icheta "Egwuregwu Egwuregwu" yana ikekwe uru dị n'echiche nke ịdị n'otu (ya mere ọbịa na echiche nke mercantilist na ọ bara ụba).
Were nọ na nso nso a na-ekwu maka mwepu
Gnome-Shell na-enwe ọganihu na mmelite ọhụụ kwa ụbọchị. Ọ bụ ezie na a ka nwere ihe ndị a ga-emerịrị "n'aka" ọ bụ eziokwu na ọ bụzịghị nke mbụ ahụ nke anaghị ekwe ka ihe ọ bụla mee. Ojiji nke Extensions ga-ebuputa desktọpụ a n'ụdị dịka o mere na Firefox, ọbụlagodi n'oge na-adịghị anya anyị ga-enwe ike ịwụnye ha naanị site na ịnweta extension.gnome.org na ịpị bọtịnụ.
Kpamkpam kwenyere. Echetara m mgbe m wụnye ya na Eprel 7 ma ọ bụ 8 ma nwee obere ahụhụ na-akpasu iwe na-adịkwaghị ebe ahụ ma ugbu a ọ dị mfe ịhazi, ọ bụ ezie na ọ ka na-efu.
nke Iri na atọ:
I di mma pelad @, amaghi m ihe bu mmekọahụ ka m jiri akara.
Na archlinux enwere ya kemgbe tupu gnome 15 fedora 3 apụọ ma nwee ezigbo ahụmịhe, ọ dị mma karịa na F15, ebe m wụnye ya na m nwere ike ịhụ na ọ kawanye nke ọma na ọ naghị enye m ọtụtụ ịgba ụkwụ dị ka ọ dị na mbụ ( ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ahọrọ m debs na rpms (ọ kwesịrị ịbụ ihe a na-emebu), ọ bụ ezie na ọ ka nwere ọgbaghara ọ bụla na nchekwa na njikwa ngwugwu ma ọ bụ na ọ bụ ihe m na enwere m ihe nke fedora ihe (n'ihi nsogbu dị iche iche n'oge gara aga) ).
Mana ọ bụrụ na m ga-ekweta na ndị enyi na-eyi fedora nwere obi anụrị. Ikekwe nsogbu m na esemokwu m ugbu a na rpm's, fedora na karịsịa kde, bụ ihe karịrị mmetụta placebo na / ma ọ bụ trauma n'ihi nsogbu dị iche iche (ọtụtụ) site na mgbe m malitere na mgba ndị a karịa ihe ọ bụla ọzọ. ma rue taa enwere m nsogbu na fedora nke na-ekpuchi ihe nkesa eserese, ma ọ bụ nsogbu na repositories na anaghị m echegbu onwe m ịgbalị idozi ha.
Emere m nsogbu n'ikwu okwu n'echeghị oke. Ebumnuche m abụghị iji hụ na naanị G3 na Gnome-shell gbara ọsọ na Fedora, mana m mere ma mara maka njehie ahụ. Ebumnuche m bụ ịkọwapụta na ugbu a ọ bụghị na ngbagha ọ bụla ọ ga-ekwe omume ịnweta ezigbo ahụmị na akwara na ọ ga-adị m mma ma ọ bụrụ na ọ ga - eme n'ọdịnihu, yabụ ekwesịrị m ịsị na Fedora 15 bụ otu n'ime nsogbu ndị ọ na - jikọtara nke ọma, mana ikekwe ọ bụghị naanị otu (dịka ị gosipụtara n'okwu Arch).
Omume dị na Ubuntu (nke bụ ebe m nwalere ya) abụghị ihe na-atọ ụtọ mana ọ bụghịkwa panacea.
Agbalịrị m usoro ndị a ma etinyeghị m shei gnome ahụ, ọ nwere ihe na-efu?
ok, m nwalere ozo ya azala m soso
$ sudo apt-nweta nweta nkwalite && sudo apt-nweta wụnye dconf-ngwaọrụ gnome-themes-standart gnome-session-fallback gnome-tweak-tool
$ sudo apt-nweta nweta nkwalite && sudo apt-nweta wụnye dconf-ngwaọrụ gnome-themes-standard gnome-session-fallback gnome-tweak-tool
anwale gnome shei
Anaghị m akwado ya na onye ọ bụla, ugbu a, m na-agbalị ịlaghachi gnome shei 2, a hapụrụ m na "mwute ihu" na ozi na "ihe mejọrọ" na mgbe m malitere nnọkọ na kpochapụ gnome, ihuenyo bụ chernovil, uuuhhhhm ihe ojoo
O di nwute na otu ahu adighi eme anyi nile. Gbalịa ịwụnye site na iji Synaptic, ma eleghị anya, ihe ga-adị iche.
sudo wụnye sudo apt-nweta wụnye gnome-sheel
Ọ bụ ya mere ụfọdụ anaghị amalite nnọkọ
Ndo m hapụrụ usoro iwu bụ:
Ị nwetara ya. Dika m siri tinye na Synaptic, o doro anya na ụfọdụ nchịkọta m wụnye chọrọ Gnome-Shell dị ka ndabere na ọ bụ ya mere ọ jiri tinye ya n'enweghị nsogbu. Amaghị m ya. Daalụ..
Enweghị nsogbu ọ bụla maka nke anyị, ihe dị mkpa bụ inyere ibe anyị aka =) mmakọ!
Nabata ntuziaka ahụ, mana ihe karịrị otu onye ọrụ novice na-eso ya n'eleghị anya na nkwupụta ga-echeta nne gị ma tinyegharịa elav. hahaha oge na adighi ntutu na gi jogburu onwe, o kwesiri ibu onye ndu ka o tinye gnome shei ma hu ya nke oma odighi "apt-get install gnome-shell" anywhere.
Na njedebe ọ ga-akara ha na ọ gaghị enweta gnome-themes-standart; o doro anya ebe ọ bụ na okwu standart adịghị, ihe ziri ezi bụ ọkọlọtọ. Mgbe emechara ị nwere ike iji (dị ka mgbọrọgwụ)
apt-nweta wụnye gnome-themes-ọkọlọtọ
ha dị 12mb karịa ma ọ bụ karịa. Mgbe ahụ ọ bụrụ na ha reboot na voila ihe niile kwesịrị ịdị mma.
I kwuru eziokwu, daalụ maka mgbazi ..
Daalụ maka ntinye. Site na ebe a enwetara m ihe m chọrọ iji mee ka Gonme shei rụọ ọrụ zuru oke maka m na Ubuntu 11.10.
Ekele dịrị gị maka ịkwụsị na ịgwa anyị na onyinye anyị nyeere gị aka ...
Gụọ m: Gụọ RSS sitere na Google Reader na desktọọpụ gị
Ma ọ bụ, IBM si opensource ọzọ ka Silverlight na Flash